कर मा आईपी को दर्ता लागि म्याद
एक व्यक्ति एक उद्यमी बन्न निर्णय गरेको छ भने, यो आईपी को दर्ता लागि म्याद पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा एक नागरिक समय कर अधिकारीहरूले संग दर्ता गर्न मा वृद्धि गर्छ भने, यो ठीक अपेक्षित छ भन्ने छ। वा, उदाहरणका लागि, अन्तिम दर्ता सम्म सञ्चालन गर्न सक्षम हुने छैन। सामान्य मा, एक व्यक्ति उद्यमी रूपमा दर्ता धेरै सुविधा र nuances छ। यी सबै थप छलफल गरिनेछ।
वास्तवमा, यो बुझ्न त कठिन छ। रूसी कानून अपिल गर्ने पर्याप्त। र त्यसपछि सबैलाई सक्षम समस्या समाधान गर्न कठिनाई बिना हुनेछ। पहिलो स्थानमा के हेर्न? कति छिटो व्यक्तिगत कारोबारको दर्ता गरेपछि कर कार्यालय दर्ता गर्न आवश्यक छ?
आफूलाई वा subordinates संग?
पहिलो कुरा सबैलाई एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ - धेरै भएको उद्यमी सञ्चालन गर्न योजना कसरी निर्भर गर्दछ। त्यहाँ घटनाहरू दुई संस्करणहरु छन्। परिस्थिति आधारमा, आईपी को दर्ता को अवधि परिवर्तन हुनेछ। तपाईं आफैलाई लागि काम गर्न सक्छन्। त्यो subordinates बिना छ। यो एउटा सानो व्यापार स्वामित्व योजना निम्ति सबै भन्दा साधारण विकल्प छ। अक्सर, यो मामला मा, एक व्यक्ति एक स्वतंत्र जारी छ
र त्यहाँ कर्मचारीहरु संग एक उद्यम को विकल्प छ। यो कठिन त्यहाँ मालिक र आफ्नो कर्मचारी हो भनेर अनुमान छ। यी2परिस्थितिहरू, कर कार्यालय र अन्य शरीर मा विभिन्न दर्ता समय सीमा। र यो भन्नुभयो, गरिएको छ, तपाईँ हरेक नागरिक जान्नु आवश्यक छ।
पहिलो यो आफैलाई मा काम गर्न योजना छ जसमा अवस्था विचार गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, FSS र RPF मा आईपी को दर्ता लागि म्याद छैन मामला छ। किन? यो कुरा कर्मचारीहरु किराया गर्ने हुनेछ छैन नागरिक, यी अङ्गहरू मा परिसंचरण मुक्त गर्ने अधिकार छ भन्ने छ। तर तुरुन्तै कर अधिकारीहरूले संग कागजातहरू को कार्यान्वयन पछि। कर्मचारीहरु बिना व्यवसायीहरूको लागि अनिवार्य दर्ता भएको FSS र RPF प्रदान गरिएको छैन।
सपा तत्काल दर्ता पछि सबै आवश्यक डाटा कर अधिकारीहरु5काम दिन EGRIP भित्र हस्तान्तरण हुनेछ। तदनुसार, सामाजिक बीमा कोष, साथै पेन्सन संस्थाहरू गर्न "जाँच मा" कुनै पनि समयमा। तर यो सबै काम गर्दा एक अनिवार्य प्रक्रिया हो। तर, अभ्यास शो रूपमा, सामान्यतया वास्तै छैन।
कर्मचारी संग काम
तर तपाईं रूस मा subordinates लेना अलि फरक नियम कार्य गर्नेछ चाहनुहुन्छ भने। त्यहाँ पहिले उल्लेख शरीर मा दर्ता सपा-कर्मचारी को एक निश्चित अवधि छ। निस्सन्देह, कर अधिकारीहरूले नै ह्यान्डल हुनेछ। यो एक अनिवार्य प्रक्रिया हो।
तदनुसार, को उद्यमी छैन आफ्नै subordinates, काम गर्नेछ भने, FSS र RPF मा रेकर्डमा राख्दै सोच्न छ। यसबाहेक, तत्काल कर्मचारी रूपमा दर्ता गर्न। तर के समयमा तपाईं एक विशेष मामला मा पूरा गर्न आवश्यक? केही सुविधाहरू संगठन एक व्यक्ति उत्तेजित गर्दछ छ जसमा निर्देशन सिधै निर्भर छन्।
पेंशन कोष मा आईपी को दर्ता लागि म्याद कति छ? वा बरु, के मा जरूरी पेन्सन कोष संग दर्ता गर्न, subordinates को कर्मचारी काम उद्यमीहरू समय अवरोध पूरा छ? 2016 मा, रूस मा कुनै विशिष्ट सख्त नियम। थप ठीक, नागरिकहरु विचार लागू गर्न धेरै लामो समय दिइनेछ।
यसरी, पेन्सन कोष को उद्यमी आईपी को दर्ता को मिति देखि एक महिना भित्र दर्ता लागि कागजात को प्याकेज लागू गर्न अनुमति दिन्छ। थप विशेष, 30 दिन। अन्यथा कर्मचारी एक निश्चित सजाय कुर्न हुनेछ। ती वा पछि अन्य संगठनहरू मा दर्ता सन्दर्भमा बेईमान मालिकहरुलाई गर्न उपाय जोखिम। तपाईं पहिलो एक वा अर्को प्रक्रिया समर्पित छ कति समय बुझ्न आवश्यक छ।
के शब्द एकमात्र स्वामित्व दिनुभएको छ? FSS - कि उद्यमी द्वारा उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को शरीर, छ। अन्यथा, पेन्सन कोष को मामला मा, यो सजाय संग धम्की छ। यो क्षेत्र मा प्रतिबन्ध के हुन्? को नियम अनुसार, यो रसिद प्रमाणपत्र मानक ढाँचा कुनै 10 पछि भन्दा दिन employing आईपी दर्ता व्यक्त गर्न आवश्यक छ।
यो FSS रूस को पेन्सन कोष संग भन्दा धेरै कठिन छ भन्ने बाहिर जान्छ। उहाँले दर्ता सर्तहरू उलङ्घन भने के सजाय, को उद्यमी पाउनेछन्? र सामान्य मा, कसरी एक पी रूपमा दर्ता गर्न? बुझ्न सबै यो कानुनी प्रशिक्षण बिना मान्छे पनि सक्छन्!
लेट भुक्तानीको लागि पेनाल्टी
विभिन्न अङ्गहरू मा आईपी को दर्ता लागि म्याद अब स्पष्ट बाट। प्रक्रिया कर अधिकारीहरूले संग व्यापार को दर्ता पछि ठाउँ लिन्छ। एक कर्मचारी निर्धारित समय भित्र राख्छ भने के हुन्छ? यो अवस्थामा, तपाईं राम्रो भुक्तानी गर्न हुनेछ। यसलाई जो संगठन मा नागरिक एक नियोक्ता रूपमा चिन्ह छैन खाता, मा लिएर, एक व्यक्ति आधारमा स्थापित छ।
हामी RPF बारेमा कुरा गर्दै भने, यो बारेमा 5000-10000 rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ। तर FSS भुक्तानी को मामला मा एकदम वृद्धि। तसर्थ, न्यूनतम भुक्तानी लगभग 20 हजार rubles छ। निस्सन्देह, यो नागरिक सकेसम्म र पेन्सन र सामाजिक बीमा कोष स्थापना मा एक दर्ता रूपमा पूरा गर्न बाध्य हुनेछ। मात्र पछि यो कुनै पनि समस्या बिना सम्भव हुनेछ र यी संगठनका लागि केही योगदान गर्न।
आईपी को दर्ता लागि प्रक्रिया
र अब तपाईं अवधि एकमात्र स्वामित्व कर सेवाहरू आदर मामला छ के थाहा हुनुपर्छ। कति समय आफ्नो आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न मा खर्च छ? सुरु लागि यो प्रक्रिया क्रम के छ बुझ्न सिफारिस गरिएको छ। यो प्रक्रिया शीघ्र मदत गर्नेछ। आईपी दर्ता कसरी गर्ने? हामी विचार महसुस मद्दत गर्ने पक्का हो कि मात्र केहि चरणहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूमध्ये निम्न कदम हो:
गतिविधिको प्रकार निर्धारण। NACE आधारित छान्न सुनिश्चित हुन।
कर को सङ्कल्प। केही समय आईपी को दर्ता गरेपछि, तपाईँले कर प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर थप कि पछि।
दर्ता लागि कागजात को संग्रह। आफ्नो पूर्ण सूची तल प्रदान गरिएको छ।
मस्यौदा र नागरिक को दर्ता को स्थान मा कर गर्न तत्संबंधी आवेदन दाखिला।
आईपी दर्ता को तयार प्रमाणपत्र प्राप्त।
केही कठिन वा यसको बारेमा विशेष। तर कर संग समय आईपी दर्ता कति छ?
कागजात को विचार
सबै खम्बा छ के मा निर्भर गर्दछ। आईपी को दर्ता प्रक्रिया, सिद्धान्त, कागजात को संग्रह सहित, यो जवाफ गाह्रो छ भने। कहिलेकाहीं प्रक्रिया धेरै महिना लाग्न सक्छ। नागरिक केही कागजात तयार छैन, विशेष गरी यदि वा विनिमय को प्रक्रिया मा उनि हाल छन्।
तर तपाईं एक मानक रूप आवेदन फाइल पछि आईपी दर्ता म्याद रुचि राख्नुहुन्छ भने, अनुमानित मान सकिन्छ। औसत मा, देखि रजिष्ट्रेसन प्रमाणपत्र गर्न स्थानान्तरण कागज थाक35 दिन देखि विस्तार। अधिकतम - एक हप्ताको। कर अधिकारीहरूले यसलाई आईपी को दर्ता को प्रमाणपत्र लागि लागू गर्न सम्भव हुनेछ जानकारी गरिनेछ। तर प्रयोगात्मक मिति पहिले नै ज्ञात छ। यो कर अधिकारीहरूले उच्च लोड मुनि बढ्न सक्छ।
आईपी को दर्ता लागि कागजातहरू
नागरिक व्यक्तिगत उद्यमी रूपमा दर्ता गर्न आवश्यक छ? ती वा अन्य संगठनहरू मा दर्ता को समय थाहा महत्त्वपूर्ण छ। तर कर अधिकारीहरूले देखि एक निश्चित प्रमाणपत्र सम्म, खाता पेन्सन कोष र FSS मा लिएर सोच्न सक्दैन। कागजातहरू आईपी प्रशोधन गर्न आवश्यक छ कि, निम्न:
नागरिक-टाउको (आरएफ पासपोर्ट) को प्रमाणपत्र;
एक रसिद 800 rubles को मात्रा मा शुल्क को भुक्तानी संकेत।
अरू केही आवश्यक छ। को कागजातहरू मूलहरू र notarized प्रतिहरू उपलब्ध छन्। बयान कर अधिकारीहरूले पहिले नै लेखिएको छ। कर प्रणाली, राष्ट्रिय कर लागि चयन गरिएको छ जो संकेत हुनुपर्छ त्यहाँ।
कर प्रणालीको परिवर्तन बारे
अब आईपी रूपमा दर्ता अवधि, साथै एक उद्यमी रूपमा नागरिक को दर्ता लागि प्रक्रिया खाली गर्नुहोस्। र के व्यक्ति थाहा छैन आवेदन पेश को समयमा कर प्रणाली कस्तो छनौट गर्न भने? त्यहाँ व्यवसाय गर्दै लागि कर शुल्क भुक्तानी क्रम परिवर्तन गर्न धेरै समस्या बिना अनुमति केही प्रतिबन्ध छन्।
सामान्य कराधान प्रणाली उद्यमी कुनै पनि अद्यावधिक छैनन् भने लागू गर्न, तार आईपी दर्ता सम्म। USN, विविध छन् कि समय सीमा सेट, सामान्यतया एक पटक बयान मा संकेत गर्नुभयो। यदि यो गरेको थिएन, त्यसपछि दर्ता 30 दिन हुनेछ। त्यसपछि आईपी को "सरल कर प्रणाली" मा हालको वर्ष काम गर्नेछ। वा आवेदन हालको वर्ष को 31 डिसेम्बर अघि पेश गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा मा, USN अर्को वर्ष देखि प्रयोग भएको छ। UTII कर अधिकारीहरूले भन्दा5दिन निर्णय पछि पछि कुनै सूचित आवश्यक छ। पेटेंट को उद्यमी को सुरु गर्नु अघि कम्तिमा 10 दिन जारी छ।
अब, शब्द आईपी दर्ता एक विशेष मामला मा बुझ्ने छ। अब नागरिक कुनै पनि समस्या बिना उद्यमी रूपमा आकार लिन सक्नेछन् रूपमा। आखिर, दर्ता क्रम पनि ज्ञात भयो।
एक किशोर के हो? यो अवधारणा समाज विकास बढाउँछ?
व्यवस्था "वृद्धहरुको मा" संघीय। संघीय व्यवस्था एन परिवर्तन र टिप्पणीहरू 5-FZ
खरीद सम्झौता अपार्टमेन्ट रद्द भइरहेको छ के को कारण?
कार को सामने सीट मा एक बच्चाको यातायात: नियमहरूमा
खूनी लागि अस्पताल - नर्वे मा जेल
राष्ट्रिय परम्परा आधारमा heraldic प्रतीक - हतियार र Mordovia को झण्डा को कोट
हलोजन दीपक - दैनिक जीवनमा प्रयोग
साम्राज्यहरु रेड बुक बाट एक व्यक्ति हुन्
Imamat - एक इस्लामी राज्य हो
गर्भावस्थामा एक नाक ले दिन्छ - कस्तो व्यवहार गर्ने
गिरावट मा मध्य समूहमा शैक्षिक यात्राको
के सपना लेट पति? oneiromancy
मेरिना Dyuzheva: जीवनी, Filmography र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
कसरी मान्छे रोक्न?